GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Arabic Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Japanese Korean Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Thai Tsonga Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Ajụjụ Ndị Na-agụ Akwụkwọ Anyị Jụrụ
Ọ dị nnọọ mfe ịgwa Chineke okwu mgbe ọ bụla. Otú ahụ obi na-atọ nna nke hụrụ ụmụ ya n’anya ụtọ ma ụmụ ya na-agwa ya otú obi dị ha, ọ bụ otú ahụ ka obi na-atọ Jehova Chineke ụtọ ma anyị na-ekpeku ya ekpere. Ma, dị ka nna ọ bụla maara ihe na-eme, Chineke anaghị eme ihe niile a rịọrọ ya. E nwekwara ezigbo ihe kpatara ya. Ihe ndị mere ọ na-anaghị eme ihe niile a rịọrọ ya ọ̀ bụ ihe mmadụ na-agaghị amatali, ka ò kwuru ha na Baịbụl?
Jọn onyeozi kwuru isi ihe kpatara ya. Ọ sịrị: “Obi ike anyị nwere n’ebe ọ nọ bụ na ihe ọ bụla nke anyị rịọrọ ya dị ka uche ya si dị, ọ na-anụ olu anyị.” (1 Jọn 5:14) Tupu Chineke azaa ekpere anyị, arịrịọ anyị na uche ya ga-abụrịrị otu. Ụfọdụ ndị na-ekpe ekpere ka Chineke meere ha ihe o doro anya na ọ bụghị uche ya. Dị ka ihe atụ, ha na-arịọ ka ha merie na lọtrị ma ọ bụ ka ha rie ego ha na ndị ọzọ tiri n’aka. Ndị ọzọ na-ebu ihe na-adịghị mma n’obi ekpe ekpere. Jems, bụ́ onye na-eso ụzọ Jizọs, dọrọ anyị aka ná ntị ka anyị ghara ịna-ekpe ekpere otú ahụ, sị: “Unu na-arịọ, ma unu adịghị arịọta, n’ihi na ihe mere unu ji na-arịọ ezighị ezi, ka unu wee mefuo ya n’agụụ ihe ụtọ anụ ahụ́ nke na-agụ unu.”—Jems 4:3.
Weregodị ya na mba abụọ na-agba bọl. Mba nke ọ bụla n’ime ha ana-ekpe ekpere ka ha merie. Mmadụ ekwesịghị ịtụwa anya na Chineke ga-aza ekpere a na-ekpeku ya ka o meere otú ndị ihe ọma ma mejọọ ndị nke ọzọ. Ọ bụkwa otú ahụ ka ọ na-anaghị aza ekpere mba abụọ na-alụ agha n’oge a na-ekpe ka ha merie.
Chineke anaghị aza ekpere nke ndị na-eleda iwu ya anya. E nwere mgbe Jehova gwara ndị ji ihu abụọ na-efe ya ofufe, sị: “Ọ bụ ezie na unu na-ekpe ọtụtụ ekpere, adịghị m ege ntị; aka unu jupụtara n’ọbara.” (Aịzaya 1:15) Baịbụl kwuru, sị: “Onye na-ewepụ ntị ya ka ọ ghara ịnụ iwu—ọbụna ekpere ya bụ ihe arụ.”—Ilu 28:9.
Ma, Jehova na-ege ntị mgbe niile n’ekpere nke ndị ji ezi obi na-akpọku ya, bụ́ ndị ji ike ha dum na-efe ya ofufe otú ọ chọrọ. Ọ̀ pụtaziri na ọ ga na-emere ha ihe ọ bụla ha rịọrọ ya? Mba. Legodị ihe atụ ụfọdụ dị n’Akwụkwọ Nsọ.
Mozis na Chineke dị n’ezigbo mma; ma, tupu Chineke emeere ya ihe ọ rịọrọ, mara na ọ rịọrọ ya “dị ka uche [Chineke] si dị.” O nwere mgbe Mozis gwara Chineke ka o meere ya ihe na-abụghị nzube Chineke, ya bụ, ka o kwe ka ya banye n’ala Kenan. Ọ rịọrọ ya, sị: “Biko, ka m gafee hụ ezi ala ahụ nke dị n’ofe Jọdan.” Ma tupu mgbe ahụ, a gwara Mozis na ọ gaghị aba n’ala ahụ n’ihi mmehie o mere. Ya mere, kama imere Mozis ihe ọ rịọrọ, Jehova gwara ya, sị: “O zuworo gị! Agwakwala m okwu banyere ihe a ọzọ.”—Diuterọnọmi 3:25, 26; 32:51.
Pọl onyeozi kpere ekpere ka Chineke mee ka nsogbu ọ kpọrọ “ogwu n’anụ ahụ́” laa. (2 Ndị Kọrịnt 12:7) “Ogwu” a nwere ike ịbụ ọrịa anya na-anaghị ala ala ma ọ bụ nsogbu ndị mmegide na “ụmụ nna ụgha” na-enyekarị ya. (2 Ndị Kọrịnt 11:26; Ndị Galeshia 4:14, 15) Pọl dere, sị: “Ugboro atọ ka m rịọsiri Onyenwe anyị arịrịọ ike ka ihe a si n’ebe m nọ pụọ.” Ma, Chineke maara na ọ bụrụ na Pọl anọgide na-ekwusa ozi ọma n’agbanyeghị “ogwu n’anụ ahụ́” ahụ na-esogbu ya, ọ ga-edo anya na ọ bụ Chineke nyere ya ike nakwa na Pọl tụkwasịrị Ya obi kpamkpam. N’ihi ya, kama imere Pọl ihe ọ rịọrọ, Chineke gwara ya, sị: “A na-eme ka ike m zuo okè n’adịghị ike.”—2 Ndị Kọrịnt 12:8, 9.
N’eziokwu, Chineke ka anyị mara ma ọ̀ ga-akacha baara anyị uru ma o meere anyị ihe anyị rịọrọ ya. Jehova na-emere anyị ihe ga-abara anyị uru mgbe niile ma ọ bụrụ na arịrịọ anyị na nzube ya e dere na Baịbụl bụ otu.